अब देखि ३ महिना तालिम नलिएर बिबाह गर्न न’पाइने ! – Life Nepali
अब देखि ३ महिना तालिम नलिएर बिबाह गर्न न’पाइने !
काठमाडौं – कहीँ नभएको जात्रा हाँ’डीगाउँमा भन्ने उखानजस्तै इण्डोनेसियामा लागू हुने भएको छ । हो, इण्डोनेसियामा अव बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ । बिहे गर्ने नेपाली परम्परा अनुसार मागी बिबाह, राजी खुसीमा गरिने भागी बिबाह र अदालतमा गरिने काेर्ट म्यारिज हामीले देखिअाएकै चलन हाे । बिहेका लागि के’टाके’टीको मन मिल्नु पर्यो । परम्परागत बिहेमा घरपरिवारको पनि स्विकृति अनिवार्य हुन्छ । यसबाहेक बिहेका लागि कुनै परीक्षा नै पास गर्नुपर्ने नियम दुनियामा कतै सुनिएको थिएन । ** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
मिडिया रिपोर्ट अनुसार इण्डोनेसिया सरकारले आगामी वर्ष सन् २०२० देखि प्री-वेडिङ कोर्स अर्थात् विवाहपूर्व पाठ्यक्रम निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । इण्डोनेसियाको मानव विकास तथा संस्कृति मन्त्रालय, धार्मिक मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यो पाठ्यक्रम तयार पारेका हुन् । उक्त पाठ्यक्रममा युवाहरुलाई जीवनमा बिहे पश्चात् आउने परिवर्तनका विषयमा सचेतना प्रदान गरिनेछ ।
ताकि वैवाहिक जीवनका स’मस्याहरुलाई सहजै हल गर्न सकियोस् र दाम्पत्य जीवनका स’मस्याकै कारण स’म्बन्ध न’टुटोस् । साथै बिहेलाई कसरी सफल बनाउने र बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा पनि उक्त पाठ्यक्रममा सिकाइनेछ । यो कोर्स ३ महिनाको हुनेछ । यो पढाई पूरा नगरीकन कुनैपनि युवा बिहेका लागि योग्य हुनेछैन । अर्थात् जसले यो पाठ्यक्रमको पढाई पास गर्नेछ, उसले मात्र बिहे गर्न पाउनेछ ।
Previous कसरी लि’क भ’एर आ’यो नेपाली चे’लि’को गो’प्य भि’डियो !
Next साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस !
51 mins ago Life Nepali